Ukhonjwe indlela ungqongqoshe wezeMpilo e-Eastern Cape
OBEWUNGQONGQOSHE wezeMpilo e-Eastern Cape uNkk Sindiswa Gomba
UNDUNANKULU wase-Eastern Cape uMnuz Oscar Mabuyane ugcine enqume ukumxosha unqgongqoshe wezeMpilo uNkk Sindiswa Gomba othinteka emacaleni amabili enkohlakalo.
UMabuyane umemezele ukuthi usemkhombe indlela uGomba esithangamini nabezindaba ngoLwesine ekuseni kulandela ukudedelwa kwakhe ngebheyili kaR1 000 ngenyanga edlule ecaleni lenkohlakalo ethinta umngcwabo kalowo owayengumengameli wakuleli uMnuz Nelson Mandela.
Ngaphandle kokusolwa ekudliweni kwezimali ngomngcwabo kaMandela muva nje igama lakhe liphinde lavela kumbiko weSpecial Investigative Unit (SIU) ebiphenya ngenkohlakalo ethinta amathenda eCovid-19. UGomba usolwa ngokuba nesandla ekuthengweni kwezithuthuthu okwakuthiwa zizolekelela ukuthutha abasebenzi bezempilo bafinyelele ngokushesha kubantu emphakathini.
UMabuyane uthe ungqongqoshe wezokuBusa ngokuBambisana neziNdaba zoMdabu e-Eastern Cape uMnuz Xolile Nqatha uzobamba izintambo njengongqongqoshe wezeMpilo ngaphambi kokuthi kuqokwe ozovala indawo kaGomba.